Barlamaanka Puntland oo kala diray golihii garsoorka Puntland. – Radio Daljir
Barlamaanka Puntland oo kala diray golihii garsoorka Puntland.
Luulyo 20, 2016 4:10 b 0
Garoowe, July 20 2016-Golaha wakiilada ee dowladda Puntaland ayaa maanta oo arbaco ah kala diray Maxkabada Sare ee Puntland, kadib markii uu sheegay inay dhammaatay muddo xileedkeedii.
Mas’uuliyiintii maxkadda sare ee dowladda Puntland ayaa maanta waxaa lagu kala diray fadhi uu maanta barlamaanku yeesahy Garowe oo looga dayay xaalada garsoorka Puntalnd.
Madaxweeynaha dowladda Puntland ayaa 4 bilood ugu soo daray Mudada xil Hayntooduna masuuliyiinta maxkamada sare, laakiin waqtigaas waa uu soo idlaaday, sidaas darteed ayay xildhibaanadu ugu codeeyeen in la kala diro madaxda maxkamada sare ee Puntland.